I-Mongolia International Road Transport-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>EzokuThutha Emgwaqweni Wezizwe>Ezokuhamba ngomgwaqo eMongolia
Ama-Sohologistics alayisha izimpahla zakho kulo lonke elase China bese aletha eMongolia ngechweba lase-Erlianhot, i-Ceke, iGanqi Maodu, iZhuengadabuqi, i-Azharat, iMandala, i-Ebudug, i-Alshan, ichweba le-Bagmodu ngamaloli athwala izinto noma amanye amaloli akhethekile.
Hlobo luni lwezimpahla olufanele ukuthuthwa komgwaqo okuya eMongolia?
A.Ubude noma ububanzi bemithwalo budlula usayizi wesitsha futhi wedlula umthamo wesitimela ngemitha eyodwa skwele yamarhasi asindayo.
Isiteshi sesitimela saseB.Railway lapho insiza yokuqasha isitsha ingatholakali.
I-C.Cargos idinga isikhathi esiphezulu ngenkathi ukuhamba kwezitimela kungenakuqinisekisa umjikelezo wokuhamba ngenxa yethonya lezitimela ze-liner nesikhathi sokuhamba.
Ungasenza kanjani isimemezelo senkambiso, ukuthunyelwa kwamasiko kanye nokuvunyelwa kwesiko lokuthuthwa kwemigwaqo yamazwe omhlaba ukuya eMongolia?
A. Ukuthuthwa komgwaqo eMongolia ukwenza isimemezelo sokuthumela ngaphandle ngokuya ngemininingwane efanele yezithuthi zezangaphandle kanye namasiko endawo ngemuva kokulayisha ezimotweni zakwamanye amazwe eSupervised Warehouse.
B.Uhambo lokuhamba ngomgwaqo oluya eMongolia lumenyezelwe emazweni asendleleni.
Ukuhamba ngomgwaqo okuya eMongolia kungamenyezelwa ethekwini elingumngcele ukuze kutholakale amasiko noma endaweni yephrojekthi.
Yimuphi umshini osetshenziselwa ukuthutha umgwaqo omkhulu oya eMongolia?
Kuthiwani ngomthethosivivinywa wokulayishwa kwezokuhamba ngomgwaqo emhlabeni jikelele?